Bernard Gonzalez Markii Laga Helay Xanuunka Coronavirus Ayaa Uu Qudha Iska Jaray? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Bernard Gonzalez Markii Laga Helay Xanuunka Coronavirus Ayaa uu Qudha Iska Jaray?
Kubbada cagta dalka France ayaa musiibo iyo naxdin la kulantay kadib markii la xaqiiyay geerida mid ka mid ah dhakhaatiirtii kooxaha horyaalka Ligue 1 kaasi oo qudha iska jaray ka dib markii laga helay caabuqa coronavirus.
Dhakhtarkii kooxda Stade de Reims ee Bernard Gonzalez ayaa qudha iska jaray kadib markii loo sheegay in uu qabo cudurka coronavirus kaas oo bilihii ugu danbeeyay aduunka faro baas ku hayay.
Warbaahinta dalka France ayaa hadda xaqiijiyay in dhakhtarkii kooxda Reims ee Bernard Gonzalez uu geeriyooday kadib markii uu isagu sabab isku noqday ee uu isdilay.
Wargayska Le Parisien ayaa shaaciyay in Bernard Gonzalez oo 60 sano jir ahaa uu is dilay kadib markii laga helay cudurka coronavirus.
Markii cudurka coronavirus laga helay waxa uu Dr Bernard Gonzalez karantiil kula jiray xaaskiisa taas oo sidoo kale laga helay cudurkan laakiin waxa uu u qoray warqad uu ugu sharaxay sababtii dhabta ahayd ee uu nafta isku dhaafiyay.
Warqada uu Dr Bernard Gonzalez qoray intii aanu is dilin ayaa noqotay mid muraaro dilaac awgii lala akhriyi kari waayay iyada oo xaaskiisa, waalidkiisa iyo kooxda Reims ay arkeen argagixii ugu waynaa wuxuuna madax waynaha kooxda Reims uu ku sifeeyay arintan COVID 19 oo kooxdiisa waddnaha ka soo weeraray.
Maayirka magaalada Reims ee Arnaud Robinet ayaa ka hadlay geerida uu isku gaystay dhakhtarkii kooxda Reims ee Bernard Gonzalez wuxuuna maayirku yidhi: “Dareen xoogan ayaan u hayaa waalidkiisa, xaaskiisa iyo qoyskiisa, waa dhibane COVID-19 ah. Waxaan ogahay in uu warqad ka tagay uu ku sharaxay go’aankiisa, laakiin waan iska indho tirayaa waxa ay ka kooban tahay”.
Mid ka mid ah kooxda Reims oo la hadlay wargayska ayaa sheegay in ayna xataa ogayn in dhakhtarkii kooxdooda ee Bernard Gonzalez uu is dilay wuxuuna yidhi: “Todobaadkii hore ayaan isaga la hadlay, marnaba kamuu fikirayn. Waa wax aan la fahmi karin, alla maxay musiibo tahay. Hadda waxaan u baxayaa in aan ciyaartoyda iyo shaqaalah u sheego. Waxay noqonaysaa mid amakaag xun leh”.
Madax waynaha kooxda Stade de Reims ee Jean-Pierre Caillot ayuu hadalku ka lumay markii loo sheegay geerida Bernard Gonzalez wuxuuna yidhi: “Kalmadaha ayaa i guuldareeyay, warkan ayaa amakaag igu riday. Cudurkan faafaaga ahi waxa uu Stade de Reims ka soo weeraray waddnaha”.
“Hamigiisii kooxda ee in ka badan 20 sanadood waxa uu ku soo fuliyay halka ugu saraysa ee xirfadlenimo, si dulqaad leh iyo hanaan aan xataa danaystenimo ahayn . Markii ay kooxdu xaalada ugu adag ku jirtay waxa uu Bernard Gonzalez ku soo shaqeeyay lacag la’aan”
“Waxa uu ahaa dhakhtarkayga shaqsiga ah, maanta fikirkayga, ka kooxda oo dhami waxay la sii jiri doonaan xubin xoogan, waxay u tagaysaa xaaskiisa iyo waalidiintiis” ayuu madax waynaha Reims ee Jean-Pierre Caillot uu hadalkiisa raaciyay.
Madax waynaha kooxda Reims iyo maayirka magaalada ayaa si anfariir iyo amakaag leh ku ogaaday geerida Dr Bernard Gonzalez iyada oo maayirku uu awoodi kari waayay in uu akhriyo warqadii uu ku dardaarmay Gonzalez ee uu ku sharaxay go’aankii uu isku dilay.
Kaftankii Uu Jeediyey Taageere Kooxda Chelsea ah Oo Keentay In Kaftanka Uu Dhinac Kale u Jeediyey Raheem Sterling?